Apple inoshanda muApple Chitoro chitsva iri muWashington DC | IPhone nhau
Apple yanga ichishanda zvakaomarara munguva pfupi yapfuura ichigadzira nekuvhura maApple matsva pasi rese. Nepo runyerekupe rweApple Store iyo yaizove iri muNevada Shopping Center kuGranada iri kutsakatika, iya yeApple Chitoro chitsva iri muWashington DC iri kuwedzera, kwavangadai vakasarudzira chiratidzo cheguta iro ivo aisazosiya asina hanya nemunhu wese anogara muguta. Runyerekupe rwekutanga nezve ichi chitsva cheApple Chitoro chakasvika pakutanga kwegore, asi mafambiro azvino anoita kunge anonyatso simbisa mamiriro ezvinhu.
Apple inotarisira "kugadzirisa" ichi chivakwa chine makore gumi nematatu-, chiri pane imwe yemigwagwa yepakati muWashington DC. Kuti uite izvi, zvinoita mari inorema kudyara, kuwedzera kuchikwereti chitsva, uye isu tinorangarira kuti Apple haina tsika yekutenga nzvimbo idzo Apple Store iri anoda kuvarovera, kuitira kuti vangangosiya chikepe chisati chanyura.
Chitoro chitsva cheApple chaizove nacho dhizaini yakafanana neiya yekupedzisira yakavhurwa muSan Francisco uye zvakare muLondon, pamwe nekubatana kweFoster & Partner. Zviripachena kuti Apple inoda kutora mukana wenzvimbo yakaita seiyi:
Nhaurwa pakati peanokwanisa masimba neApple dzakafambira mberi, zvisinei, zvirevo zvekubhadhara hazvisati zvadomwa, zvirinani kusvikira Bhodhi rapedza vhoti pamusoro penyaya iyi.
Kuwedzera uku kutsva kuchaunza Carnegie Library kuhupenyu, iyo yakave yakaoma mitezo kwemakore. Apple iri kuisa makumi emamirioni emadhora kudzoreredza ichi chivakwa kuitira kuti tikwanise kupa sevhisi nyowani kune vedu 700.000 vagari uye mamirioni makumi maviri vagari. Ehe, chibvumirano ichi chinosanganisira chikamu chekudzidzisa - Max Brown
Zvese zvinonyatsoratidza kuti inotevera Apple Chitoro ichasvika muWashington DC mune rinenge gore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoshanda muApple Chitoro chitsva iri muWashington DC